सरकारी मिडिया राससमा यत्रो बदमासी : २ वर्षपछि उस्तै फोटो कसरी दोहोरियो ?
काठमाडौं – राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) सरकारी मिडिया हो । रासस समाचार बिक्री र सरकारी अनुदानबाट सञ्चालन हुन्छ ।
राजनीतिक प्रभावका कारण समाचारमा सत्ता पक्षधरता देखिने गरेका आरोप लाग्दै आएपनि बिहीवार एउटा गम्भीर बदमासी देखापर्‍यो ।
राससको नियमित ग्राहक रहेका संस्थामा कार्यरत पत्रकार झस्किए । राससमा बिहीवार राखिएको १३ नम्बर फोटो क्याप्सनमा लेखिएको छ – वर्षाले ग्रामीण सडकको विजोग, वर्षाका कारण डोटीको मौवा–मेल्लेक सडक हिलाम्मे भएपछि सडकमा फसेको यात्रुवाहक जीपलाई डोरीमार्फत तान्दै यात्रु । तस्बिर : विमलबहादुर विष्ट ।
वर्षात्मा हिलो हुनु र त्यसको फोटो र समाचार मिडियामा आउनु सामान्यजस्तै हो तर राससमा राखिएको फोटो असामान्य थियो । राससको नियमित ग्राहक रहेको लोकान्तर डटकमका पत्रकारले यस्तै फोटो केही वर्षअघि समेत देखेका थिए । फोटो संग्रहमा खोज्दै जाँदा त्यो फोटो भेटियो ।
राससमा पहिल्यै प्रकाशित भइसकेको फोटोको क्याप्सनमा लेखिएको भेटियो – सार्वजनिक जीप हिलोमा, डडेल्धुराको उग्रतारा–मेलौली सडक खण्डको पुईलेक बजार नजिक सार्वजनिक यातायातको जीप हिलोमा फस्दा डोरीले तान्दै यात्रु । डडेल्धुराका ग्रामीण सडकमा वर्षाका कारण सवारीसाधन चल्न सकेका छैनन । तस्बिर : धनबहादुर भण्डारी, डडेल्धुरा, रासस ।
एउटै फोटो पहिल्यै डडेल्धुरा रिपोर्टरको नामबाट प्रकाशित भयो भने त्यही फोटो बिहीवार डोटी रिपोर्टरको नामबाट प्रकाशित भयो । राससका ग्राहक रहेका मिडियामा यसबारे खोजीनीति भयो तर राससको डेस्क सम्हाल्नेहरूले यसबारे किन पत्तो पाएनन् ?
डडेल्धुरा रिपोर्टर धनबहादुर भण्डारीको नामबाट प्रकाशित फोटोको ‘प्रोपर्टी’ हेर्दा यो फोटो २०७४ साउन १० गते अर्थात् जुलाई २५, २०१७ मा राससमा प्रकाशित भएको रहेछ । झण्डै २ वर्षपछि उस्तै फोटो राससमा अर्कैको नामबाट दोहोरिएको छ ।
फोटोमा कसले बदमासी गर्‍यो ? राससले खोज्ने नै छ । सरकारी बजेटमा रजाइँ गरिरहेका पदाधिकारीले जनताले जान्नेसुन्ने गरी यस्तो बदमासी हुनुको कारणबारे स्पष्ट समेत पार्नुपर्ने हो ।
राससको तालुकवाला मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले समय–समयमा पत्रकारलाई अर्ती उपदेश दिन्छन् तर उनकै मातहतको राससमा यस्तो हालत छ ।